မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အမေရိကန်နိုင်ငံအား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ရပ်ဆိုင်းကာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Paju မြို့၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော တောင်ကိုရီးယား-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြုံးယမ်း ၊ ဩဂုတ် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ(DPRK)က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အမေရိကန် စစ်တပ် ထွက်ခွာသွားရန် ယနေ့ ဩဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး လာမည့် အမေရိကန်-တောင်ကိုရီးယား ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများအား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူကလီးယားလက်နက် တည်ဆောက်ရန် ကတိပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အလုပ်သမားပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Kim Yo Jong က အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့သည် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို အသည်းအသန် စတင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ တညီတညွတ်တည်း စွပ်စွဲရှုတ်ချခြင်း နှင့် ပယ်ချခြင်းများ ရှိနေသော်လည်း မတည်ငြိမ်သောအခြေအနေကို ပို၍ အရှိန်မြှင့်နေကြောင်း Korean Central News Agency (KCNA) သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ဦးတည်သော အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရန်လိုသော မူဝါဒကို အထင်ရှားဆုံး ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ မိမိတို့နိုင်ငံအား အင်အားသုံးထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် မိမိတို့ပြည်သူများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ၎င်းတို့က ခြိမ်းခြောက်နေသကဲ့သို့ ၎င်းတို့ကိုယ်ကိုပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း လုပ်နေသည့် မကြိုဆိုအပ်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် တန်ဖိုးကြီးကြီးမားမား ပြန်လည်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် အခြေအနေကို ပို၍ အန္တရာယ်မြင့်တက်စေကြောင်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်၏ ညီမဖြစ်သူ Kim Yo Jong က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်-တောင်ကိုရီးယား ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများတွင် ဩဂုတ် ၁၀ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ အကျပ်အတည်းကာလ အမှုထမ်းများအတွက် ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်း နှင့် ဩဂုတ် ၁၆ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ စုပေါင်းကွပ်ကဲမှုလေ့ကျင့်ခန်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း KCNA ထံမှ သိရသည်။
Kim Yo Jong က မိမိတို့ ထပ်တလဲလဲ သတိပေးနေမှုများအား ဂရုမစိုက်ဘဲ အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဘက်က အန္တရာယ်ရှိသော စစ်ပွဲလေ့ကျင့်မှုများ ရှေ့သို့ တိုးလာခြင်းသည် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပို၍ပြင်းထန်သော လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုဖြင့် အသေအချာ ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့အား ရုပ်သိမ်းရန် Kim Yo Jong က တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ကျွန်းဆွယ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ တပ်ဖြန့်ထားသည့် ကျူးကျော် တပ်ဖွဲ့များ နှင့် ၎င်းတို့၏ စစ်သုံးပစ္စည်းများကို ရုပ်သိမ်းသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ ရှိနေသမျှ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် အခါအားလျော်စွာ အခြေအနေပို၍ ဆိုးရွားလာစေမည့် မူလဇစ်မြစ်မှာ မည်သည့်အခါမျှ ပျောက်ကွယ်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း Kim Yo Jong က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
PYONGYANG, Aug. 10 (Xinhua) — The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) on Tuesday urged the U.S. military to leave South Korea, pledging to build up the DPRK’s nuclear weapons in response to the upcoming joint U.S.-South Korea military drills.
Kim Yo Jong, vice department director of the Central Committee of the Workers’ Party of Korea of the DPRK, said inastatement released by the Korean Central News Agency (KCNA) that the United States and South Korea desperately started joint military exercises, further accelerating the unstable situation “despite the unanimous denunciation and rejection at home and abroad.”
“They are the most vivid expression of the U.S. hostile policy towards the DPRK, designed to stifle our state by force, and an unwelcoming act of self-destruction for whichadear price should be paid as they threaten the safety of our people and further imperil the situation on the Korean peninsula,” said Kim, who is also the younger sister of the DPRK’s top leader Kim Jong Un.
The joint U.S.-South Korea military exercises include an “exercise of the staff for crisis control” on Aug. 10-13 anda“combined command exercise” on Aug. 16-26, according to the KCNA.
“The dangerous war exercises pushed ahead by the U.S. and the South Korean side disregardful of our repeated warnings will surely make them face more serious security threat,” she warned.
She urged the United States to withdraw its troops from South Korea, saying “for peace to settle on the peninsula, it is imperative for the U.S. to withdraw its aggression troops and war hardware deployed in South Korea.”
As long as the U.S. forces stay in South Korea, “the root cause for the periodic aggravation of the situation on the Korean peninsula will never vanish,” Kim said. Enditem
Photo – File Photo taken on March 7, 2016 shows K9 self-propelled howitzers during joint military drills held by South Korea and the United States in Paju, South Korea.(Xinhua/Newsis)